> Resource > Mac > Avidemux u Mac Alternative (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Avidemux u Mac waa aalad video tafatirka fudud oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay by SourceForge. Waxa ay shaqo weyn ee buuxinaya goynta fudud, shaandhaynta iyo Deji hawlaha on Mac. Tan iyo markii uu la tacaalayo qaabab kala duwan sida video AVI, MPEG, MOV, MP4, MKV, iwm, si aad u dhif doonaa kulmaan file akhri dhibaatooyinka qalad sida iMovie. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, sida qalab tafatir ah u Mac, waxaad dareemi karaa qaar ka mid ah hawlaha ay aad u aasaasi ah, ma ay dhergin kara baahidaada. Oo shilalka joogtada ah (Haddii aad socda OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10,10, 10.11) eryo aad waalan haddii aad khabiir ku ah waxay ku aadan.
Sidaas halkan waxaad heli doontaa Avidemux kale oo dheeraad ah oo awood leh oo la isku hallayn karo oo ah Mac: Wondershare Video Editor for Mac . Isku day lacag la'aan ah hadda.
1 taageero qaab Unlimited
Sida Avidemux, barnaamijkan kale Mac ayaa taageero ballaadhan diyaar u ah qaabab. Haddii aad weligaa ka walwal qabto adayga of qaabab, codecs, heerarka, oo barnaamij u universal tafatirka ay wax uga qabtaan. Markaas barnaamijkan idinka qaadan doonaa madax xanuun iska. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab video caadiga ah ee aad qaban doonaa, sida AVI, wmv, MOV, MP4, MTS, DV, M4V, ASF, FLV, 3GP, iyo sidoo kale qaar ka mid ah files dhif ah u aragtay, TOD, EVO, TP, DAT, si ay u magacaabi yar. Dhammaan audio iyo sawiro si joogto ah ayaa sidoo kale taageeray. Sidaas oo keliya kuu jiidin iyo hoos u faylasha aad u hesho, Uma baahna in wax loogu badalo u waafaqsan yahay ka hor, iyo tayada waayi maayo.
2 Simple iyo sax video tafatirka
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac waa mid gaar ah sababtoo ah qalabka tafatirka dhamaystiran. Ka sokow dhammaan qalabka edit aasaasiga ah sida falinjeeerka, lana siii, warejin, qaybsama, flipping, waxa kale oo kuu saamaxayaa inaad audio ka video ka saar, ku dar music jeeda in video, voiceover u hagaagsan, iyo in ka badan.
Waxaa ay mudantahay in la xuso in Avidemux ee kale Mac sidoo kale loogu qalab Power ah, taas oo aan la heli karin in xataa codsiyada video tafatirka xirfad-fasalka ugu. The dhigay Tools Powerl ka mid ah Janjeeri-Shift (beddesho goobta adduunka Ghadafi galay), Muuse (ka caawisaa si ay u qariyaan shakhsi ama aan habboonayn ee gobolka), Toos Off (bedeli wejigaaga la waji ugu funny).
3 filtarrada saamayn Rich inay taabtaan ilaa aad videos
Avidemux for kale Mac ku qalabeysan yahay diyaariyeen ah ee saamaynta muuqaal classic oo qurux badan si aad u dalbato in aad video clip. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa filter saamayn si aad u dalbato in dhammaan ama file hal sida baahidaada. Filtarrada Qaar ka mid ah xitaa u ogolaan in aad la qabsato oo xuduudaheedu si uu u kasbado natiijooyinka gaar ah. Suuqa garab previewing dayn doonaa inaad iska arko saameynta waqtiga dhabta ah.
4 Save iyo wadaagaan abuurkiinna meel kasta
Ma jiro qof ka fogaadaan doonaa in asxaabta iyo qoyska internet-ka wadaagaan curiyay ay. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac qaadataa daryeelka aad u baahan tahay, oo ka dhigaysa video qaybsiga abid fudud. YouTube, Facebook, Twitter: Marka aad dhamaysato video tafatirka, waxaad ka app this wadaagi kartaa goobaha bulshada si toos ah.
Ma doonaysaa in aad wareejiso video ah saxar ah in qalabka kale ee digital sida iPad, iPhone, Android casriga ah ee loo maqli karo? Dooro nooc gaar ah oo ka hooseeya "Device" tab, ka dibna u hagaagsan in aad ciyaaryahan la xadka lahayn.